Local News – Page3– ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ရွှေမင်္ဂလာ
လမ်းမတော် မြို့နယ် နေအိမ် တိုက်ခန်းတွင် သေဆုံးနေသူ အမျိုးသားတစ်ဦးတွေ့ရှိ
လမ်းမတော် မြို့နယ် အမှတ် ၃ ရပ်ကွက် ၇ လမ်း အိမ် အမှတ် ၆၂ မြေညီ ထပ်ခိုးတွင် ကိုရဲဝင်းသူ(ခ)ရဲလေး အသက် ၃၂ နှစ်ခန့်သည် ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီ ခန့်က နေအိမ် တွင်သေဆုံးနေ သည်ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း လမ်းမတော်မြို့မရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် ကျော်လင်းထွန်း ကပြောသည်။ “သေဆုံးသူက အရက်အလွန်အကျွံသောက်တတ်သူတစ်ဦးဖြစ်သလို တစ်ခါတရံမှာလဲစိတ်ထင်ရာကို လုပ်တတ်သူလို့ Read More
မေပြည့်စုံအောင် လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးပြေးမြင်မိမှာက Body Structure ကောင်းကောင်းနဲ့ လေယာဉ်ဝတ်စုံလေးဝတ်ထားတာ ကိုမြင်မိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတောင့်တင်းမှုကြောင့် အမျိုးသားပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကြီးလာသူလေးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတွေကြားမှာလည်းချစ်သူခင်သူပေါများသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုနေထိုင်တတ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကမှ အဆိုတော် Ah Boy နဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ရဲ့ Pre Wedding ပုံတွေအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရိုက်ကူးပြီး ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ကြော်ငြာတွေလက်ခံရိုက်ကူးလျှက်ရှိနေပြီး သူမရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာ ၂ ခုရှိပါပြီ။ “ညီမကအပျော်အပါးအရမ်းကြိုက်တတ်တယ် 17/18 လောက်တုန်းက Read More
AUSTRALIA AWARDS ပညာသင်ဆုကို ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာလျှောက်ထား နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ စတင်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၃၀ ရက်ရက် နောက်ဆုံးထား လျှောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာသင်ဆု လျှောက်ထားချင်သူတွေ အနေနဲ့ ပညာရေးအခြေပြု လူသားရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပညာရေးနှင့် သင်ကြားရေး(Education and Training)၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (Education Management)၊ လူသားရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Human Resource Development) နယ်ပယ်များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အစိုးရနှင့် လူသားအရင်းအမြစ် ထောက်ပံ့ရေး နယ်ပယ်များဖြစ်သော Humanitarian Read More
ရွှေမြန်မာ များ ရှက်တတ်ကြပါစေ!!(5.12.17)
ဒီညနေ ဦးပိန်တံတားရောက်တယ်။ ဧည့်သည်က တံတားနောက်ခံနဲ့ နေဝင်ချိန်ကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ချင်တယ်။ ကျမ မသွားချင်ဆုံးက ဦးပိန်တံတားအောက်ပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဧည့်သည်တွေက မင်းတို့မြန်မာတွေ ညစ်ပတ်လိုက်တာနော်၊ စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်တွေကို ဒီလိုပဲစွန့်ပစ်သလားဆိုပီး မကြာခင်အပြောခံရတော့မှာလေ။ အောက်လည်းရောက်ရော အခြားဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးကို မြန်မာပြည်မှာ အဲလောက် အမှိုက်တွေပေါနေရင် နောင်အနာဂတ်မှာ မင်းတို့ဆီ ဘယ်သူမှ လာလည်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနေတာကြားလိုက်ရတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ အမှိုက်ချတဲ့သူတွေကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ (မြန်မာငွေ ၁၃၀၀၀၀) Read More
လှိုင်သာယာ ကို ဒုစရိုက်မြို့တော်မဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေးပါ
ဓားကြီးတွေ ပေါ်တင်ကိုင် ဆဲဆိုစိန်ခေါ်နေကြပေမဲ့ အရေးယူမှု အားနည်းတယ်။စက်မှုဇုန်ကြီးတွေတည်ရှိပြီးရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့လူဦးရေသိပ်သည်းဆုံးမြို့မှာဒုစရိုက်မှုခင်းတွေ များပြားလာတဲ့အတွက်လှိုင်သာယာမှာနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူတွေ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ လွန်ကဲနေရပါတယ်။ ဒေသခံ ရင်ဖွင့်သံ ကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရှိမှာ လှိုင်သာယာမှာနေ စီးပွားရေးလုပ်နေရပေမဲ့ အဆင်ပြေတဲ့တစ် နေ့ လှိုင်သာယာက အပြီးထွက်ခွာချင်လာတယ်။ ငါးနှစ်သားလောက်ကတည်းကနေလာ တာ အခု ၂၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ အရင်ကလို လှိုင်သာယာက မသာယာတော့ပါဘူး။ လူငယ်အချို့ ပညာဆည်းပူးတက်လမ်း ရှာဖို့ထက်လူမိုက်ဖြစ်ချင်လာကြတယ်။ လူမိုက်ဆိုရင် လှိုင်သာယာမှာ နေရာရတာကိုး။ ဖဲဝိုင်း လိုက်ပြီး စောင့်ရှောက်ခတောင်းမယ်။ ဆိုင်ကြီးတွေမှာ Read More
အမေရိကန်တွင် တိုးဂိတ်ဝန်ထမ်း မြန်မာအမျိုးသမီးတဦး ကားတိုက်ခံရပြီး သေဆုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ တံတားတစင်းပေါ်က တိုးဂိတ်တခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတဦးဟာ ကုန်တင်ကားတစီးဝင်တိုက်ခံခဲ့ရပြီး သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းက ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဘေးဘရစ်ခ်ျတံတားပေါ်မှာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် မြန်မာအမျိုးသမီး စီစီဟန်ဟာ နေရာတင် သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ အက်စ်အက်ဖ်ဂိတ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အဲဒီနေ့မနက် ၅ နာရီကျော်လောက်မှာ ယာဉ်မောင်းဟာ ကားကို အရှိန်နဲ့ မောင်း နှင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး တိုးဂိတ်ကြေးကောက်စခန်းကို ၀င်မတိုက်မိခင်မှာ Read More
အသက် (၄) နှစ်ရွယ်သမီးအား အမျိုးသားတစ်ဦးက သားမယား အဖြစ် ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်
ဒီဇင်ဘာ (၃) ရက်နေ့ ညနေ (၇) နာရီခန့်တွင် အသက်(၄၀)ကျော် အမျိုးသားတစ်ဦးက အသက်( ၄) နှစ်အရွယ်သမီးအား သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ရန် ကြံစည်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင် ခင်ဦးမြို့နယ်၊ မဒေါင်းကြီးကျေးရွာနေ (ဘ) ဦးတင်ဝင်း၏သမီး မအေးမြတ်သူ နေအိမ်သို့ နေ့စဉ်အမြဲသွားရောက် ကစားနေသော သမီးဖြစ်သူ မအေးမြတ်မွန်အား မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ပုမှ သွားရောက်ခေါ်ရာ မအေးမြတ်သူမှ ပြန်သွားပြီးဟု ပြောပြသဖြင့် ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုသို Read More
လူ့အခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက် မြန်မာ့အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးဟု မြန်မာ သံအမတ် တုံ့ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးထင်လင်းက တုံ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်က ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့က ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ ကျင်းပတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ လူနည်းစုတွေရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေဆိုင်ရာ အထူး အစည်းအဝေးပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတ၀န်း လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ဖို့ ပေါင်းစုကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ နိုင်ငံရေး သဘောမဆောင်ရဘူး၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမျှတရမယ်၊ ဘက်မလိုက်သမာသမတ်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ စံနှုန်း တွေနဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်က တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာနေတာကို Read More
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နာရီစင် မြန်​မာပြည်​မှာ ရှိ​နေတာပဲကိုး
လှတောသားတစ်ယောက် ဈေးဝယ်ဖို့ဝက်လက်မြို့ရောက်တော့ ဈေးထိပ်နာရီစင်ကြည့်မိသတဲ့။ သူကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နာရီစင်ရဲ့အနောက်ဖက်နာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးနေသတဲ့။ ဒါနဲ့ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ပတ်ပြီး မြောက်ဖက်ကနာရီကြည့်တော့ ၁၂:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ဆက်ပတ်ပြီး အရှေ့ဖက်ကနာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၃:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။ နာရီစင်ကိုဆက်ပတ်ပြီး တောင်ဖက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ၆:၀၀ နာရီထိုးနေပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ ဈေးထဲဝင်ဈေးမဝယ်တော့ပဲ လှတောပြန်သွားသတဲ့။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့မိသားစုကိုပြန်ပြောလိုက်တာက- “ဝက်လက်ဈေးထိပ်က နာရီစင်ကြီး ကြီးချက်ကတော့ကွာ မနက် ၀၉:၀၀ နာရီကပတ်ကြည့်လိုက်တာ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီထိုးမှ Read More
မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ကို မြတ်နိုးသော စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ကန့်ဘလူခရိုင် ကန့်ဘလူ မြို့နယ် ပင့်သာတည်ပင်သူလေးမခင်မျိုးဦး
အုတ်နှဲဘုတ်ရွာသို့ ရွှေပေါင်လောင်ဘုရား သမိုင်း ရိုက်ကူးရန် ရောက်ရှိနေသော ဆံရစ် ဝိုင်း ကျောင်းသူလေး အကြောင်း ! (မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်ပြန်လည် ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်) အညာမြေရွှေဘို၏ တက္ကသိုလ်မြေတွင် ရောင်စုံခြယ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများ အရောင်တဖျပ်ဖျပ်တောက်ပကာ တက္ကသိုလ်၏အလှကို မွမ်းမံနေကြသည်။ တက္ကသိုလ်မြေမှာ ပညာရည်နို့သောက်စို့ရင်း နုနယ်ငယ်ရွယ်လှသွေး ကြွယ်ကြချိန်မို့ မည်သူ့ကိုပဲကြည့်ကြည့် နုပျိုလန်းဆန်းတက်ကြွကာ ရွှင်လန်းမှုအပြည့်။ ငယ်ဂုဏ်ကလေးတွေကလည်းရှိပြန်၊ အရွယ်အလျောက် တတ်မြောက်လာသည့် ပြင်တတ်ဆင်တတ်မှုကလေးကလည်း ပါလာပြန်ဆိုတော့ ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်ထဲ ဝင်လိုက်ရသည်မှာ ရောင်စုံပန်းခင်းကြီးထဲ Read More